Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment Co., Ltd. owasekwa ngo-2000, i umenzi professional benza uphando, uphuhliso kunye nokuveliswa kwezixhobo wokwaphusa kunye granulating noomatshini. Okwangoku kukho ishishini kunye iintlobo ezininzi kunye nokubalulwa e China.Changzhou Daming Pharmaceutical Equipment Co., Ltd. owasekwa ngo-2000, i umenzi professional benza uphando, uphuhliso kunye nokuveliswa kwezixhobo wokwaphusa kunye granulating noomatshini. Okwangoku kukho ishishini kunye iintlobo ezininzi kunye nokubalulwa e China.
inkampani yethu ibizela ubugcisa kunye namava ekhaya nakumazwe aphesheya, kwaye ngqongqo i imigangatho ISO9001 inkqubo esemgangathweni ngamazwe ukuqinisekisa umgangatho imveliso. Kuphuhliso kunye nophando kwezixhobo wokwaphusa, siye rhoqo ukusungula nokuguqula ukuba bayile kwaye esenziwa uthotho iimveliso eziphambili nokusindisa amandla-. Ngokutsho nezidingo zemakethi, siye saphuhliswa angaphezu kwamashumi amane uthotho omiswe, granulating, ukuxuba imveliso de-dusting. Iimveliso ezisetyenziswa kakhulu wokwaphusa kunye dehumidification izixhobo zoshishino ekrwada okanye imveliso kwi zamayeza, imichiza, ukutya, ishishini ukukhanya kunye namanye amashishini, kwaye wamkeleka kakuhle kakhulu ngabasebenzisi. Agents ziyamenywa ukuba uvavanyo kunye nokuhlola.
inkampani yethu ibekwe kwi Jiangnan omhle Chinese (ezantsi kweqondo lama-iteksti River) idolophu kunye nesixeko odumileyo mveliso Changzhou. Le ise besiza Shanghai kunye Nanjing Development Zone lwezoQoqosho, isimo sezulu ezimnandi kunye nokuthuthwa lula. Le nkampani iye yomelelani nincedwa ngamandla zobugcisa, inkqubo uvavanyo egqibeleleyo, izixhobo processing ephucukileyo kunye nenkqubo engqongqo yolawulo. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi abatsha nabadala, abahlobo kuzo zonke iinkalo zobomi apha ekhaya nakumazwe angaphesheya ukuze batyelele baze basebenze kunye ukudala ikamva elingcono!